FANJAKANA ANATY FANJAKANA ANY TSIVORY : Manararao-pahefana diso tafahoatra ny lehiben’ny distrika sy ny polisy | NewsMada
Nisehoana habibiana nataon’ny polisy sy ny miaramila indray tany amin’ny faritr’i Tsivory iny ny fiafaran’ny volana aprily lasa teo. Enina mirahalahy mianaka no indray nosamborin’izy ireo tamin’ny fomba mitsipaka tanteraka ny maha olona tokoa. Taorian’izay, mpanao gazety zokiolona iray no nanatri-maso ny zava-nitranga rehetra, ary mitantara ny zava-nisy marina nitranga tany an-toerana…
Tany amin’ny volana septambra 2016 no nanomboka ny tantara. Nisehoana ady tany teo amin’ny olona roa tany an-toerana ka rehefa niakatra fitsarana ny raharaha dia misy ny resy ary misy ny nandresy. Namoaka ny didim-pitsarana tamin’ny 14 septambra ka resy tamin’izany ny vehivavy iray antsoina hoe Fety. Tsy nanaiky mora io faharesena io anefa ity farany ka nitory ireo olona naharesy azy tany amin’ny zandary tao amin’ny kaompanian’ny zandary tany Tolagnaro. “Efa fantatry ny zandary anefa ity raharaha ity ka tsy nety nandray izany fitoriana izany izy ireo”, hoy ny fitantaran-dRabena David, mpanao gazety zokiolona sady nanatri-maso ny zava-nitranga rehetra tany an-toerana. Nanitatra ihany anefa ity vehivavy ity rehefa tsy noraisin’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena ny fitoriana nataony ka lasa izy nanatona ny OMC na ny Organisme Mixte de Conception tao amin’ny faritra Amboasary, izay ny lehiben’ny distrika no mitarika azy.
Habibiana tsy roa aman-tany
Tsy fantatra izay fifandresen-dahatra nifanaovan’ilay vehivavy antsoina hoe Fety tamin’ireo tompon’andraikitry ny OMC ka ny 28 aprily lasa teo no nidina tany amin’ny kaominina ambanivohitr’i Tsivory izy ireo. “Vao tonga teo an-tànana izy ireo dia nanao ny fisamborana. Io fisamborana io izay notanterahin’izy ireo tamin’ny fomba feno habibiana tokoa niaraka tamin’ny vono sy daroka. Ny andro amin’io amin’ny 5 ora sy sasany maraina”, hoy ihany ny fitantaran’ity mpanao gazety zokiolona ity. Araka ny fitantarany hatrany, nanaraka ireo olona enina nosamborina ireo ny tenany. “Niezaka nanontany ny lehiben’ireo mpitandro filaminana nisambotra ihany aho, amin’ny maha-mpanao gazety ahy, saingy ompa sy teny ratsy no azoko. Taorian’izay dia nanatona ny kaomisera lehiben’izy ireo indray aho saingy tsy nahazo valiny mahafa-po”, hoy ihany izy nitantara ny zava-nitranga. Tampoka taorian’izay, araka ny nambarany, dia nipoaka ny basy nandritra ny fiandrasany tao amin’ny biraon’ny polisy. “Olona roa no avy hatrany dia torana, ireo olona nosamborina tamin’izany dia nofatorana ny masony sy ny tanany”, hoy ihany ny fitantaran-dRabena David ny zava-nitranga hitany tamin’io fotoana io.
Ny 8 may lasa teo no natolotra ny fitsarana ity raharaha ity. Ireo enin-dahy ireo izay notorian’ilay vehivavy antsoina hoe Fety fa nampiasa taratasy hosoka tamin’ilay didim-pitsarana nivoaka tamin’ny volana septambra 2016, ary mbola nolazainy ihany koa fa nandrahona ho faty azy. “Ny mampalahelo tamin’ity raharaha ity dia nampidirina tao anatin’ny fiampangana azy ireo fa nahatratrarana bala 10 tao an-tranony. Tsindriako eto anefa fa tsy nisy fisavana trano akory tamin’ny fotoana nisamborana azy ireo”, hoy ihany ilay mpanao gazety zokiolona izay vavolombelon’ny zava-nitranga rehetra. Rehefa vita ny fitsarana azy ireo dia nafahan’ny fitsarana avokoa izy ireo. Araka ny fanadihadiana natao, fantatra fa ny efatra tamin’izy ireo dia mpianaka ary mpitory tamin’ilay olan’ny ady tany ary ny roa no vavolombelona tamin’ny fitsarana io ady tany io ihany.
Noho ny naha-vavolombelona ity mpanao gazety zokiolona ity tamin’ny zava-nitranga rehetra nataon’ireo polisy sy miaramila nalefan’ny teo anivon’ny OMC tamin’io fisamborana io, nanomboka ihany koa ny hazalambo natao an’ity mpanao gazety zokiolona ity. “Vao fantatro izay vaovao izay dia lasa avy hatrany aho nanenjika fiara nitsoaka tao amin’ny faritr’i Tsivory. Rehefa tonga tany Tolagnaro kosa indray aho dia niakatra avy hatrany tany anaty fiaramanidina hiakatra aty Antananarivo. Henoko avokoa taorian’izay ny fandrahonana nataon’ireo tompon’andraikitra tany an-toerana satria vavolombelona manelingelina azy ireo aho tamin’ny zavatra ratsy nataony”, hoy ihany ny fitantaran-dRabena David. Izany no hanaovako antso avo amin’ireo tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena, hoy izy, mba hidina hijery ifotony ny zava-mitranga any an-toerana
Nitantara ny fomba fiasan’ny polisy tany an-toerana ihany koa ity mpanao gazety zokiolona ity. “Tsy ho afaka mora foana ianao raha toa ka misy mitory ao amin’ny polisy rehefa any Tsivory. Tsy maintsy omanina ny volabe an-tapitrisany vao afaka ao raha toa ka tsy manana omby dia ny tanimbary na ny tany mihitsy no amidy”, hoy izy. Ny tena mampalahelo, hoy ihany ny fanamarinany, dia na mpivarotra eny an-dalam-be aza dia samborin’ireo polisy ary ampidiriny anaty trano fihibohana ampangainy fa mandainga ny kapoaka famarany. Tsy afaka mora ao izay tratran’izay raha tsy mandoa volabe.